तपाईंहरुले राज्यसभामा नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि हामीलाई नेपालमा डिफेन्स गर्न गाह्रो भयो – डा. सुन्दरमणि दीक्षित | Hakahaki
तपाईंहरुले राज्यसभामा नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि हामीलाई नेपालमा डिफेन्स गर्न गाह्रो भयो – डा. सुन्दरमणि दीक्षित
२ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपालमा हिन्दु धर्मबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेपालबाट गएका तीन जनाले एकपक्षीय रुपमा नेपालको सत्तोसराप र भारतको भक्तिगान गर्नमै सम्पूर्ण समय बिताए ।
नेपालबाट गएका ३० भन्दा बढी सहभागीले नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिनुमा भारतको हात रहेको र त्यसबाट भारतलाई घाटा भएको तर्क गरे । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सहभागी उक्त कार्यक्रममा दुवै पक्षले खुलेर एक-अर्काका अपेक्षा र कमजोरीबारे चर्चा गरेका थिए ।
नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरकै थिएन । यो नेपालको गलत प्रचारबाजी हो भनेर भारतलाई नै चकित पार्ने गरी धारणा राख्ने कामको सुरुवात डा. सुन्दरमणि दीक्षितले गरेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले राज्यसभामा मणिशंकर अयैरलगायतका सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पहिलो पटक नभई यसअघि पनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइएको थियो भनेकोमा डा. दीक्षितले भने, ‘भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेकै थिएन, हामीले यो कुरा लगातार भनिरहेका थियौं । तर, तपाईंहरुले राज्यसभामा नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि हामीलाई नेपालमा डिफेन्स गर्न गाह्रो भयो । यसबाट म साह्रै मर्माहत भएको छु । दुःख लागेको छ ।
यति भनेर पनि डा. दीक्षितको चित्त बुझेन । आफनो आक्रमक शैलीमा उनले थपे, ‘खाली नेपालमा हल्ला मात्रै हुन्छ । भारतविरोधी काम मात्रै हुन्छ । यसमा तपाईहरुले सम्झाउनु पर्यो ।’
डा. दीक्षितलाई माथ गर्ने गरी पेश भएका थिए, हरिवंश झा नामक अर्का ‘नेपाली’ । उनले त यतिसम्म लाजलाग्दो गरी बोले जसबाट आयोजकहरु नै लज्जित हुनु परेको थियो । भारतीय राजदूत रञ्जित रे र नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमेत सहभागी कार्यक्रममा उनले नेपाली भन्न लाज लाग्ने गरी खुला रुपमा वकालत गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
त्यसैगरी तमलोपा एमाओवादी हुँदै अहिले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा पुगेका रामकुमार शर्माले पनि नेपालकै गल्तीका कारण नाकाबन्दी भएको बताए । बुधबार साप्ताहिक/ दैनिक नेपालमा खबर छ ।